🥇 ▷ Huami Amazfit GTS iyo Stratos 3 Ku samee mashruuc caalami ah IFA ✅
Huami Amazfit GTS iyo Stratos 3 Ku samee mashruuc caalami ah IFA
Muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa tan iyo markii Amazfit GTS iyo Amazfit Sports Watch 3 (Stratos 3) ay si rasmi ah ugu noqdeen waddankooda hooyo, oo ah Shiinaha. Hadda soosaaraha wuxuu soosaaray saacado xariif ah gudaha Jarmalka iyo si qaas ah gaar ahaan IFA 2019.
Amazfit GTS waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay bedelka dhabta ah ee Amazfit Bip. Waxay leedahay hawo badan oo Apple Watch ah. Si kastaba ha noqotee, qiimuhu aad ayuu uga jaban yahay heshiisyadii ugu dambeeyay ee Apple. Laakiin tani la yaab malahan maxaa yeelay GTS waxay la imaaneysaa astaamo yar.
Amazfit GTS wuxuu leeyahay muuqaal yar oo sifiican u shaqeynaya. Qiimaha qiyaastii ah 125 euro, waxaan u qaadanaa guriga shaashadda 1.65 inji AMOLED. Si kastaba ha noqotee, qaraarku waa 348 x 442 pixels. Aaladdaan casriga ah waxaa ilaaliya Corning 2.5D galaaska cimilada kuleylku ku xiran yahay oo kuxiran bir bir ah.
Huami wuxuu sheegay inuu doortay nambar afar geesood ah si loogu helo macluumaad ka badan wicitaanka wareega ee isla cabirka. Isticmaalayaashu waxay dooran karaan 100 wicitaan oo kala duwan; afartan ayaa dhowaan la heli doonaa. Saacaddu waxay leedahay xarig silikoon ah.
Qalabkani wuxuu raadraaci karaa ilaa 12 isboorti oo waaweyn oo ay ka mid yihiin baaskiil wadista, orodka (gudaha gudahiisa), dabaasha, socodka, barafka iyo kor u qaadida culeyska. Waxay kaloo taageero u leedahay GPS + GLONASS. Amazfit GTS sidoo kale waxay soo saartaa biotracker PPG dareeraha garaaca wadnaha ee indhaha iyo kormeerka heerka garaaca wadnaha. Si kastaba ha noqotee, Huami wuxuu sheegay in cusboonaysiinta OTA la sii deyn doono Noofambar 2019 taasoo keeni doonta wax ka ogaanshaha arrhythmia.
Saacadu waxay ku xiriirtaa Bluetooth. 5.0. Waxay sidoo kale leedahay 220 mAh batari oo soconaya ilaa 14 maalmood isticmaalka caadiga ah. Qaabka daawooyinka aasaasiga ah (Bluetooth, raadraaca garaaca wadnaha iyo howlo kale oo naafo ah), tani waxay soconaysaa ilaa 46 maalmood oo hal kicitaan ah. Tababbarka joogtada ah ee GPS-ka had iyo jeer saaran, wuxuu socdaa 25 saacadood. Saacaddu waxay qaadataa laba saacadood in lagu dallaco. Waa biyo-joojin ilaa 50 mitir.
Amazfit GTS wuxuu ku yimaadaa lix midab oo kala duwan. Waxaa jira casaan, buluug, madow, beige iyo casaan.
Amazfit 3 saacado isboorti
Amazfit 3 Sports Watch (oo loo sii daayo adduunka oo dhan sida Amazfit Stratos 3) wuxuu leeyahay magaca saxda ah ee loogu talagalay taageerayaasha isboortiga iyo ciyaartooyda xirfadlayaasha ah. Si kastaba ha noqotee, Sports Watch 3 waxay ku timaadaa laba nooc: Standard Edition iyo Elite Edition.
Saacad aad ku garaacayso 1.34-inji xoog yar oo ah soosaarid midab leh. Arrin xiiso leh ayaa ah, marka loo eego Huami, iftiinka xoogga badan, shaashadda ka sii iftiimaya. Daabacaadda caadiga ah waxaa ilaaliya Corning Gorilla Glass 3. Elite Edition ayaa kubad muraayad sapphire ah. Waxaa jira afar batoon labada nooc ee saacadda. Sidaa darteed, hal chip iyo nidaamka hawlgalka ayaa loogu talagalay habka isboorti ee xirfadleyda ah (habka isboortiga) midka kale ee chip iyo nidaamka ayaa loogu talagalay habka saacadaha caadiga ah ee smart smart (ultra mode).
Daawada isboortiga 3 waxay leedahay LPDDR3 512 RAM MB iyo 4 GB eMMC keydinta, in kastoo 1.9 GB oo keliya la heli karo markiiba Si kastaba ha noqotee, muusig muusig ayaa sidoo kale jooga. Waad keydin kartaa raadad fara badan oo aad ku dhejin kartid taleefoonka gacanta ee Bluetooth-ka. Saacadani waxay raadraaci kartaa wadarta guud ee 19 nooc oo isboorti
Amazfit 3 Sports Watch (Stratos 3) waxay leedahay batari 300 mAh ah. Marka waxaan u baahanahay 2 saacadood si aan u dallaco. Si kastaba ha noqotee, habka smart, saacaddu waxay sii socotaa 7 maalmood oo hal kicitaan ah, halka habka aadka u culus uu socdo 14 maalmood. Habka GPS, wuxuu socdaa illaa 35 saacadood oo leh saxitaan sare, 45 saacadood oo leh saxitaan dhexdhexaad ah iyo 70 saacadood oo ah habka GPS. isticmaalka hooseeya.
Isticmaalayaasha ayaa dooran kara inta u dhexeysa seddex iskudhaf boodhadh: GPS + Beidou, GPS + GLONASS ama GPS + Galileo. Sidoo kale xaadirkan waa NFC.
Sidoo kale ka eeg xayeysiintaan Amazfit